Ukudoba ku Vitebsk esifundeni ebusika
Vitebsk sifunda ezifundeni ezicebile kunjalo, abantu bendawo benza amahlaya ukuthi at ngamunye wabo, kukhona eyodwa Echibini elithile elincane. Ngempela, kunezifundo ezingaphezu kuka ayisikhombisa amachibi, phakathi lapho kukhona kokubili amancane enkulu ngokwanele, futhi loMfula abaningi babo eyakhelwe iholide amakhaya kanye ekamu amasayithi. Ezinye amachibi kunikeze umuzwa zasendle, kodwa akuyona. Kuyinto kulezi emachibini noma emifuleni, ngokuvumelana ochwepheshe, ukudoba engcono senzeka Vitebsk esifundeni. Nakhu kufika abathandi ukudoba kwamanzi, futhi balwela ukuthola endaweni engcwele. Bona akuzange kumesabise izimo Spartan: abadobi okhuthele aphule, wasusa itende lakhe ahlale amahora nenduku yokudoba ezandleni zakhe ilindele kokubamba izinhlanzi eziningi, okuyinto, mangisho, idume okudoba Vitebsk esifundeni.
Labo abahamba umsebenzi wokufuna ngwenya, kuyinto ukuthola ibalazwe esifundeni amachibi. Phela, ngezinye izikhathi ngisho izitshalo ezincane kakhulu impela ezithakazelisayo for Anglers. Ngamunye abadobi izintandokazi zabo: abanye abantu abafana ukuba izinhlanzi osesikebheni futhi abanye abantu bathanda ukubamba ogwini. Yebo, izimayini lihlukile: ezinye igiya nokujikijela ethembeni ukunqaka Pike, kuyilapho abanye bajabule perch noma bream. Abaningi ziyadingeka ukufunda nsuku zonke umhlahlo zidla ukuba Vitebsk nezindawo ezizungezile. It yenzelwe ngqo abadobi ngesisekelo idatha ku bezulu, amakhalenda zonyaka kanye zidala izinkathi izinhlobo ezithile zomsebenzi.
Ukudoba ku Vitebsk esifundeni kungenzeka unyaka wonke. Okuwukuphela umehluko yezinkathi ezithile ukuthi tench, carp crucian, noma okubi wabanjwa ice, ngoba ukuwa ubusika ibe stupor, ngakho ekubambeni kwabo kunzima.
Ethandwa kakhulu kule ndawo emachibini Obsterno ins, lapho phansi-non-iyunifomu atholakala carp futhi bream, Pike, perch kanye tench, kodwa Ukudoba kusukela ogwini kuyinkinga. eyodwa kuphela esiphethweni - udinga isikebhe.
Ezindaweni Drisvyaty ezijulile sifinyelela ka nesishiyagalolunye amamitha ukujula. Lapha ungakwazi hhayi kuphela ukubamba umhlaseli - Pike, eyikati, walleye kanye burbot, kodwa futhi nezinye izinhlanzi: umbokwane, carp, whitefish, ide.
Ukudoba ku Vitebsk esifundeni echibini idume inyamazane yayo eside lithunjwa. Izinhlanzi ungaxoxa kokubili nganeno kanye kusuka izikebhe. Ukuba yinkimbinkimbi kwayo ukudoba ngaphezulu ukujula amathonsi, ngakho Anglers abaningi qiniseka ukusebenzisa sonar. Esinye isidleke - Losvido - bacebe ngokwanele senhlanzi enkulu. Lapha ungakwazi ukubamba ngisho nalabo okokuqala ubambe nenduku yokudoba ezandleni zakhe. Ngokusho ukubuyekezwa, ngokuvamile bethola roach esikhulu bream ngisho Kilogram. Ayikho ngaphansi catchability nezinye amachibi - FPGA Shaw South, Izinwele Isiliva, Snudy, Strusno ... Ngaphezu kwalokho, esifundeni elinemifudlana yamanzi amaningi, isibonelo, Dvina.
Ukudoba Vitebsk esifundeni (isithombe esenziwe uhlobo futhi sibonise catch elikhulu, ngokuvamile baba umthombo yokuziqhenya nokugabisa ukuba nabo umdobi ukugembula) ngonyaka edonsela hhayi kuphela abalandeli 'sokuthula' ukuzingela abavela ezifundeni angomakhelwane, kodwa ngisho ochwepheshe kulo lonke elaseRussia. Sekuyisikhathi eside Abaningi babo abakhethiwe ngokwakho omunye amachibi amaningi. Ukwahlulela ukubuyekezwa, ochwepheshe ukujabulela okudoba Vitebsk nesifunda.
Ehlobo, esifundeni ezitholwa yilabo uncamela izinhlanzi osesikebheni noma ogwini at ukujula okwanele. Noma kunjalo, ukudoba ebusika Vitebsk esifundeni akuyona esingaphansi ethandwa. Nokho, akubona bonke amadamu Site wakhe. Ngo eziningi zalezi izinhlanzi iwela stupor, futhi noma iyiphi, ngisho lolo engcono kakhulu esimweni ukunyakaza. Lawa amachibi, lapho iningi uphile futhi carp crucian, okuyinto kule sizini abandayo ilapha, njengoba umthetho, kungukuthi kuzibamba. Nokho, labo imizimba amanzi lapho izinhlanzi ebusika kungenzeka, ngokoqobo egcwele abathandi ukudoba kusukela ice. Kukhona ungakwazi ukubamba Pike futhi roach, perch futhi bream. Ukudoba ku Vitebsk esifundeni catchability ebusika kulabo machibi kuphela lapho Ukwakheka zinhlobo zombuso kwamanzi abamele ahlukahlukene. Ngokusho ukugembula sekuyahwalala neze kunabayeni ehlobo, ngokusobala, ngakho bonke amachibi amakhulu futhi ejulileyo, ebanzi zapolonyayut ukudoba abathanda kusukela ice, "ahlomile" ice ngezikulufo.
ukudoba Winter ku Vitebsk esifundeni wehlukile kakhulu. Wonke umuntu ekhetha bona impela indlela yokudoba kanye ngenela, ngalo ezithakazelisayo kakhulu, nokuthi uya izinhlanzi, okuyinto engcono kakhulu kwawo. Ikakhulukazi eziningi esifundeni "Shchukarev" - abantu engibathandayo indondo ebaluleke kakhulu embonini yezokudoba ice nge Pike toothy. Kungenxa wakhe futhi ezingelwa kuzo zonke izindlela kungenzeka, omunye okuyinto zherlitsy bendabuko. amachibi imiphumela ngezinye izikhathi into eyisimanga ngempela.
Ngo lokubanjwa ebusika ngokuvamile samanje hhayi kuphela Pike, kodwa ASP nge burbot, bream futhi perch, bream. Ngaphansi ngokuvamile, lonke ebusika Peck ukuze ide chub.
On the ice lokuqala eyikati elambile bangaziqonda zonke, kodwa kuyoba umthamo owodwa kuphela. Abantu abaningi bayazibuza ukuthi ukhanga ngoba Pike kukhona catchability. Impendulo isobala kungekho ngisho Anglers abanolwazi. Tackle futhi Bait ezidingekile imisebenzi efana okudoba Vitebsk esifundeni phezu eqhweni, ifaniswe Ukukhetha indlela kuphela. Kube kufanele athobele umthetho owodwa: uma umgomo wakho - Pike, ebusika usayizi umlomo wombhobho kumele abe phakathi ngamasentimitha amahlanu, isisindo sawo kuyakhethwa kuye ngohlobo emanzini futhi khona ukugeleza.
Umbala lolo busika ngokudoba amachibi amaningi futhi Western Dvina ayethanda ukuba ukhethe yemvelo, kodwa ngezinye izikhathi ezingaphezu kuka-ice nezinhlanzi bite ku ithoni ene-asidi. Lokhu kusho ukuthi ebhokisini ngesikhathi umdobi kufanele kube ukudla okuhlukahlukene. Ngisho ezinye ehlobo kuyoba ephelele ukudoba ebusika Spoons.
Ngo-December, ikakhulukazi ngamaSonto, ethekwini Vitebsk, nahlulele by izindaba imigwaqo ayoliswe ebusika, it is ngakho aminyene ukuthi ngezinye izikhathi abantu uhleli "indololwane ukuze indololwane". Isizathu siwukuthi ngalesi sikhathi phezu kwamanzi kube okunokwethenjelwa kakhulu ngisho iqhwa. Creek e Vitebsk ngoJanuwari, futhi, akuyona dengwane. abadobi bendawo belulekwa ukuba ukubamba ku zherlitsy lapha. grouper Ngesandla kusuka kwamamitha emine kuya kwemihlanu e igiya ukujula ingagxili noma nezinye izilwane ezinkulu, kodwa hhayi lokuthi bazokwazi ukuthola phezu eqhweni. Luck incike kokubili amandla line ukudoba futhi ingwegwe phezu JIG. Okusho ukuthi, njengoba besho zendawo, okuyiwona okudoba Vitebsk esifundeni ebusika Sekuyisikhathi eside yaphenduka "yokuphila", ekuqaleni kudingeka unqume: yaneliswa perch noma ancike inyamazane emikhulu.
River imbozwe 'sokuthula', hhayi anesihlabathi ice endaweni ethile ngo-November, futhi waqhubeka kuye ngokwakhe Apreli. Nokho, ukudoba Vitebsk phezu Dvina ezithakazelisayo kokubili ebusika kanye nasehlobo. Zezinhlanzi anadromous ku-salmon Kuhambe, lamprey, salmon aseBaltic e sifinyelela ephansi - whitefish, aphele futhi ulwe. Ilokhu zinhlobo yokuhlala kukhona Pike nge Grayling, roach, bream, isiphika, perch, burbot, isiphika. Uma kuqhathaniswa nalo lonke amanzi emilanjeni Western Dvina Akumangalisi ahlanzekile. Ngenxa nokuwela kwawo amachibi eziningi zendawo lenzeka nezilwane ngempela ahlukahlukene.
Ngo-January kodoba esijabulisayo kuyinto chweba Shevensky. Le yindawo lapho echibini igama elifanayo emfuleni omncane agelezela Zapadnaya Dvina. Ice wasekuqaleni futhi uzinzile. Abaningi kule kuleli chweba wabanjwa ekujuleni e kakhulu phakathi. isayensi Chief ngesikhathi esifanayo ngoba umdobi is siphumputha phansi bese kwesokudla okunamathiselwe amahanisi - kancane kakhulu, okumenza shaking wakhe. imigwaqo eminingi ebusika uholwe ikhanda ngoba kukholelwa ukuthi le ndlela yingcweti catch kaningi acebile.
Echwebeni eduze entwasahlobo asifanele kuvalwe sokudoba ebusika. Wavusa amanzi iqala ngokushesha ukugeza ice, ngakho-ke iba yingozi ukudoba naye. Kodwa musa lihawukele, ngoba kule sizini e chweba kukhona kuphela perch encane nge roaches.
Yiqiniso, amadamu amaningi kule Vitebsk esifundeni ebusika akuzona eziningi kangaka amapaki izindawo izinhlanzi. Ngaphezu kwalokho, abaningi bendawo nethuba uthole yokudoba ngezimpelasonto kuphela. Kodwa uma kwenzeka endaweni wanika kokubamba izinhlanzi eziningi, kuba sobala ukuthi azikho izinkinga Angling ice. Njengomthetho, ezingxenyeni eziningi eNtshonalanga Dvina kakade kusukela imbobo wokuqala ungakwazi ukubamba eziningi ezincane lifiphele. Fish ezindaweni eziningi ngokuvamile imi ukujula imitha emithathu. Empeleni, abaningi bendawo belulekwa ukubamba ku zherlitsy. Ngezinye izikhathi igiya enjalo kungaba ukukhishwa futhi chub. Ngokuphambene nalokho okukholelwa yiningi, le nhlanzi obuswa main zherlitsy monofilament umugqa diameters 0,27 futhi leash usayizi 0.5.
Masicubungule yamabhola antantayo ukulingiswa eside
Khetha ibhokisi for ukudoba ebusika.
Okuhle anti-umbimbi okhilimu. Izimonyo ngoba ubusha bakho
Indlela yokwenza enhle kokoshnik ngezandla zabo?
Ukuphila isevisi evamile kwezindlu prefabricated
Umusho ngezihloko ezihambisanayo: imithetho, izibonelo